raha nanontaniana ny heviny amin`ny maha zava-dehibe ny fifidianana ben`ny tanàna eto an-drenivohitra. Nanomboka teto ny zavatra rehetra misy eto Madagasikara, ka antony maha manan-danja ny fametrahana ben`ny tanàna eto Iarivo, hoy izy. Olona mankatia ny tanàna no mipetraka eo amin`ny fitantanana satria te hametraka ny maha izy azy an`Antananarivo fa tsy noho ny kajikajy politika. Mila olona efa mahafantatra ny tanàna rahateo. Nilaza kosa ity mpanao lalàna ity fa olona efa niantsehatra ara-politka sy ara-tsosialy teo anivon`ny tanàna ihany koa no ilaina satria sarotra no mitantana azy ity. Farany, mila olona mahay miara-miasa amin`ny fitondram-panjakana. Raha hifanohatra eto foana dia tsy handroso isika. Tsy olona ambany vahohon`ny fanjakana fa afaka miara-miasa sy mifampiresaka ho an`ny tonbontsoan`ny tanàna sy ny vahoaka. Nambarany hatrany fa eto no tena ahitana ny vahoaka isaky ny faritra. Eto no ahitana ny fandrosoana lehibe indrindra eto Madagasikara ka mila olona mahafehy izany.